SAS 2022 Ajandaha Mucaaradka ▷ ku cusbooneysii HALKAN! | Sameynta iyo daraasadaha
El Adeegga Caafimaadka ee Andalusian (SAS) ayaa isugu yeedhay wadar ahaan 4.425 meelood oo loogu talagalay jagooyinka ka mid ah wareegga xorta ah. Laakiin ma iloobaan dallacaadda gudaha, oo leh 337 meelood oo dheeraad ah. Dhammaantood waxaa loo qaybin doonaa in ka badan 33 takhasusyo, oo ay ka mid yihiin Ophthalmology, Oncology, Pediatrics ama caaga Qalliinka, iyo kuwo kale. Sidoo kale shaqaalaha maamulka, oo yeelan doona wax kabadan 200 oo shaqo, cunto kariye 109 ah iyo shaqaalaha bulshada oo wadar ahaan ah 78.
Ajandayaasha mucaaradka SAS
Hoos waxaad kaheleysaa dhamaan ajandayaasha la cusbooneysiiyay si aad isugu muujiso dhammaan jagooyinka Adeegga Caafimaadka Andalusia iyo mucaaradka SAS:
Caawiye kalkaaliye caafimaad
Dhaqtarka jimicsiga jirka
Dhar dhaqid iyo kaawilid
Farsamo yaqaan takhasus ku leh Radiodiagnosis
Sida loo diiwaan geliyo tartamada SAS
Codsiyada lagu diiwaan gelin karo mucaaradka SAS, iyo waliba bixinta isla, waa la sameyn karaa iyada oo loo marayo telematics. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan, laakiin sidoo kale waxaad leedahay ikhtiyaari daabacan.
Haddii aad doorato ikhtiyaarka ugu horeeya, markaa waa inaad ku sameysaa codsigaaga kaqeybqaadashada bogga internetka ee Gudiga Andalusian iyo tan xigta cinwaanka elektarooniga, lagu buuxiyay foomka elektiroonigga ah ee u dhigma.
In kasta oo ay tahay inaad ogaato taas si aad u samayso dalabka sidan, waxaan u baahan doonnaa saxeexa dhijitaalka ah.
Marka codsiga la sameeyo, boggu wuxuu na toosin doonaa 'barnaamijka lacag bixinta'. Dhammaan dadkaas leh heer naafo ah oo u dhigma ama ka weyn 33% waa laga dhaafay lacag-bixinta la sheegay.
Hadaad rabto inaad doorato dalab daabacan, ma noqon doonto mid aad u dhib badan sidoo kale. Markaan haysan saxeexa dhijitaalka ah, waa ikhtiyaarka aan ka tagnay.
Haddana waa inaan tagnaa bogga adeegga caafimaadka ee Andalus. Markaanu halkaa gaadhno, waa inaan isdiiwaan gelinno.
Kadibna, waa inaan daboolnaa dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee la codsaday.
Markaan daboolno, waa nala soo diri doonaa emayl wata xaqiijinta.
Halkaas ayaan ka raaci doonaa codsigeenna, oo tilmaamaysa leexashada aan u nimid, gobolka, iwm.
Marka wax walba la daboolo, dukumiinti ayaa la soo saari doonaa. Marka, waa inaan marwalba keydinaa dhammaan isbeddelada aan sameynay ugu dambayntiina, daabacnaa. Dhexdeeda waxaan sidoo kale ku arki doonnaa sicirka u dhigma 42,67 euro.
Xusuusnow waa inaad hubisaa in dhammaan xogta iyo goobaha la daboolay, si looga fogaado khaladaadka.
Mar daabacay dukumintiga, waa inaad saxiixdo dhamaan nuqulada.
Iyadoo la raacayo foomka lacag bixinta, waxaan aadeynaa hay'adda si aan lacagta ugu dhigno. Qaar ka mid ah hay'adaha aad wax ka qaban karto Samee bixinta Waxay kala yihiin: La Caixa, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Cajasol, Bankia, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaan geynay dhammaan dukumiintiyada baqshad, sida nuqulka bixinta khidmadaha, arjiga iyo dukumiinti dheeri ah haddii loo baahdo. Waxaan geyn doonnaa baqshaddan Adeegyada Dhexe ee Adeegga Caafimaadka ee Andalus, iyo sidoo kale Isbitaalada Adeegga Caafimaadka Andalus ama Xafiiska Boostada.
Jagooyinka lagu doorto mucaaradka SAS
Kaaliyaha Maamulka: Xilalka kaaliyaha maamulka ee Adeegga Caafimaadka ee Andalus ayaa mas'uul ka ah ballamo iyo la-tashiyo, iyo sidoo kale diyaarinta warbixinno gaar ah. Dabaqa kaabayaashu waxay noqon doonaan kudhowaad 1300 euro. In kasta oo aysan ahayn qaddar go'an, iyadoo ay ugu wacan tahay lacagaha dheeriga ah iyo kuwa kale ee lagu kordhiyay.
Caawiye kalkaaliye caafimaad: Jagadan sidoo kale waxay leedahay mushaar dhan qiyaastii 1320 euro. Sida caadiga ah kaaliyayaashu waxay mas'uul ka yihiin nadaafadda iyo sidoo kale dayactirka goobta shaqada, daryeelka bukaanka, samaynta sariiraha ama lasocodka bukaanka, iyo sidoo kale qaybinta cuntada, iyo kuwo kale oo badan.
Waardiyayaal: Hawlaha ay qabtaan amaradu sidoo kale way badan yihiin. Kuwaas waxaa ka mid ah daabulidda qalab iyo bukaanno. Waxay caawin doonaan kalkaaliyayaasha caafimaadka, meelaynta iyo ka qaadista cufnaanta, iyo sidoo kale inay ka caawiyaan adeegyada nadiifinta qaarkood, haddii loo baahdo Mushaharkiisu waa ilaa 1200 euro.
Kalkaaliye caafimaad: Daryeelku waa mid ka mid ah shaqooyinka aasaasiga ah ee dhammaan kalkaaliyeyaasha caafimaad. Waxay la taliyaan oo qiimeeyaan bukaanada, inta ay go'aan ka gaarayaan. Waa la dhihi karaa waa nooc caawiye dhakhtarka ah, oo hawlo fara badan u dhiibta shaqaalaha kalkaalinta caafimaadka. Ku tababbarka daaweynta iyo caawinta bukaanka sidoo kale waa shaqooyin kale oo muhiim ah. Mushaharkiisu wuxuu dhaafayaa 2000 oo euro.
Dhaqtarka jimicsiga jirka: Iyaga ayaa mas'uul ka ah fulinta daaweynta baxnaaninta waxayna bixiyaan waxyaabo kale oo aan dawo lahayn oo daaweyn ah si looga hortago cuduro badan. Mushaharka jimicsiga jirka wuxuu kudhowaad yahay 1900 euro.
Dhar dhaqid iyo kaawilid: Mushaharka shaqaalaha dharka lagu dhaqo iyo birta ayaa gaaraya 1000 euro. Sidii aan horey u tilmaannay, way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran lacagaha dheeraadka ah iyo dhiirigelinta kale. Sida magacooda ka muuqata, waxay u xilsaaran yihiin nadiifinta sariiraha iyo kala-dambaynta.
Matron: Umulisada ama umulisada ayaa u xilsaaran la talinta dhinacyada kala duwan ee nolosha. Ku saabsan galmada guud ahaan iyo waqtiga uurka, dhalmada ama naas nuujinta. Dhanka mushaharka, waxay gaaraysaa in kabadan 2000 oo euro.
Scullion: Mushaharka kaaliyeyaashu waa 1200 euro. Wuxuu caawiye u noqon doonaa cuntokariyihii ugu weynaa mar walbana wuxuu la socon doonaa howlaha kala duwan ee jikada. Waxay abaabuli doontaa bakhaarka, ilaalin doontaa amarka oo dhan, waxayna ilaalin doontaa nadiifinta.
Farsamo yaqaan takhasus gaar ah u leh cilmiga Radiodiagnosis: Iyaga ayaa mas'uul ka ah qaadista sawirrada jirka si looga hortago cudurrada qaarkood. Tan awgeed waxay adeegsadaan teknoolojiyada xoogaa adag sida ultrasound ama shucaaca birlabta iyo raajada X-ray, mushaarkooda wuxuu ka badan yahay 1500 euro
Farsamayaqaan Farmashiyaha: Mushaarka aasaasiga ah ee farsamayaqaan farmashiye waa 1329 yuuro. Waxay u heellan tahay diyaarinta, iyo sidoo kale ilaalinta ama fidinta daawooyinka. Waxa kale oo aad ku qaybinkartaa cisbitaalada oo aad ku diyaarin kartaa alaab laakiin had iyo jeer iyada oo ay daawaduhu isha ku hayaan
Sidaad ogtahayba, takhasus kastaa wuxuu leeyahay a ajandaha gaarka ah oo kulligoodna waxay ku soo beegmeen mid kale oo caam ah oo waa kuwa soo socda:
Mawduuca 1. Dastuurka Isbaanishka ee 1978: Qiimaha sare iyo mabaadi'da dhiirigelinta leh; Xuquuqda iyo waajibaadka aasaasiga ah; Xuquuqda ilaalin caafimaad.
Mawduuca 2. Qaynuunka madax-bannaanida ee Andalusia: Qiimaha sare iyo ujeeddooyinka aasaasiga ah; Xuquuqda bulshada, waajibaadka iyo siyaasadaha guud; Aqoonta caafimaadka; Hay'ad hay'ad beeleed; Kordhinta xeerarka.
Mawduuca 3. Ururka caafimaadka (I). Sharciga 14/1986, ee Abriil 25, Caafimaadka Guud: Mabaadi'da Guud; Tartamada Maamulka Dowlada; Abaabulka Guud ee Nidaamka Caafimaadka Dadweynaha. Sharciga Caafimaadka 2/1998, ee Juun 15, Andalusia: Ujeeddo, mabaadi 'iyo baaxad; Xuquuqda iyo waajibaadka muwaadiniinta ee ku saabsan adeegyada caafimaadka ee Andalusia; Waxtarka xuquuqda iyo waajibaadka. Qorshaha Caafimaadka Andalus: ballanqaadyada.
Mawduuca 4. Ururka caafimaadka (II). Qaab dhismeedka, abaabulka iyo awoodaha Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegga Caafimaadka ee Andalus. Daryeelka caafimaadka ee Andalus: Qaab dhismeedka, abaabulka iyo howlaha adeegyada aasaasiga ah ee Andalus. Abaabulka Gargaarka Gaarka ah ee Andalusia. Abaabulka Daryeelka Aasaasiga ah. Ururka Isbitaalka. Goobaha Maamulka Caafimaadka. Sii wadida daryeelka heerarka daryeelka.
Mawduuca 5. Ilaalinta Xogta. Sharciga Dhaqanka 15/1999, ee Diseembar 13, ee Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed: Ujeeddo, baaxadda dalabka iyo mabaadi'da; Xuquuqda dadka. Wakaaladda Isbaanishka ee Ilaalinta Xogta.
Mawduuca 6. Kahortaga khataraha shaqada. Sharciga 31/1995, ee Noofambar 8, ee Kahortagga Khataraha Shaqada: Xuquuqda iyo waajibaadka; La tashiga iyo kaqeybgalka shaqaalaha. Abaabulka ka hortagga halista shaqada ee Adeegga Caafimaadka Andalus: Qeybaha Ka Hortagga ee Xarumaha Caawinta ee Adeegga Caafimaadka Andalusian. Maareynta walxaha noolaha. Nadaafadda gacmaha. Jirka Shaashadaha muujinta xogta. Daloolinta shilka ah. Weerarada xirfadlayaasha. Xakamaynta xaaladaha isku dhaca.
Mawduuca 7. Sharciga 12/2007, ee Nofeembar 26, ee ku saabsan Dhiirrigelinta Sinnaanta Jinsiga ee Andalus: Ujeeddo; Aagga dalabka; Mabaadi'da guud; Siyaasadaha guud ee lagu horumarinayo sinnaanta jinsiga. Sharciga 13/2007, ee Nofeembar 26, ee Kahortagga iyo Ilaalinta Guud ee Rabshadaha Jinsiga: Ujeeddo; Aagga dalabka; Mabaadi'da hagida; Tababar xirfadlayaal caafimaad ah.
Mawduuca 8. Nidaamka Sharciga ee Shaqaalaha. Nidaamka isku-dheelitir la'aanta shaqaalaha ee adeegga Maamulka Dawladda. Sharciga 55/2003, ee Diseembar 16, Qawaaniinta Qaab-dhismeedka Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka: Kala-saaridda shaqaalaha sharciga ah; Xuquuqda iyo waajibaadka; Helitaanka iyo luminta xaaladda shaqaalaha sharciga joogtada ah; Bixinta goobo, xulasho iyo kor u qaadis gudaha ah; Dhaqdhaqaaqa shaqaalaha; Shaqo; Abaalgudka; Maalmaha shaqada, rukhsadaha iyo rukhsadaha; Xaaladaha Shaqaalaha Sharciga; Nidaamka edbinta; Xuquuqda matalaadda, ka-qaybgalka iyo gorgortanka wadajirka ah.
Mawduuca 9. Madaxbanaanida bukaanka iyo xuquuqda iyo waajibaadka la xiriira macluumaadka iyo dukumintiyada caafimaad. Sharciga 41/2002, ee Nofeembar 14, aasaasiga ah ee nidaaminta is-maamul ee bukaanka iyo xuquuqaha iyo waajibaadka ka jira arrinta macluumaadka iyo dukumintiga bukaan socodka: Xaq u leeyahay macluumaadka caafimaadka; Xuquuqda asturnaanta; Ixtiraamka madax-bannaanida bukaanka; Taariikhda caafimaadka. Oggolaansho wargelin ah. Kaarka caafimaadka.
Si aad u awoodo inaad doorato kuwa gaarka ah, waxaan kuu dhaafi doonaa xiriiriyahan, halka aad ka heli doontid dhamaan ajandayaasha inaad ugu baahan tahay si dhakhso leh oo fudud.
da'da ugu yar waa 16.
Haysashada dhalashada Isbaanishka iyo jinsiyadaha Dawladaha Xubnaha ka ah Midowga Yurub.
Lahaanshaha guriga cinwaanka loo baahan yahay saldhigyada gaarka ah ee wicitaan kasta, waxay kuxirantahay booska aan u aadayno helitaanka.
Inaadan haysan nooc fayl edbin ah oo ku dhex jira adeegga Adeegyada Caafimaadka ama Maamulka Dadweynaha.
Ma lihid xukun ciqaabeed kama dambays ah dambi kasta oo ka dhan ah xorriyadda ama ay ku jirto gacan ka hadal, iyo sidoo kale xadgudub galmo.
Markii aan ka hadlayno meelaha boos celinta loogu talagalay dadka naafada ah, kaliya codsadayaasha leh naafonimo u dhiganta ama ka weyn 33% ayaa ka qaybqaadan kara.
Marka lagu daro shuruudahan guud, shahaadooyinka looga baahan yahay takhasus kasta waa in la tixgeliyaa:
Loogu talagalay Maamulka:
Cinwaanka Farsamo yaqaan Sare (Tababbarka Xirfadeed ee Shahaadada Sare ee laan kasta). Bachelor-ka sare ama BUP.
Imtixaanka gelitaanka jaamacadda ee loogu talagalay dadka ka weyn 25 sano.
Cinwaanka Farsamada (Tababbarka Xirfadeed ee Fasalka Dhexe).
Waxbarashada Dugsiga Sare ee Qasabka ah.
Tababbarka Xirfadeed ee Darajada Koowaad.
Caawiye Kalkaaliye Caafimaad:
Cinwaan Caawiye Kiliinig ah (Darajo Koowaad Tababar Xirfad, Laanta Daryeelka Caafimaadka).
Kaaliyaha Kalkaaliyaha Caafimaad (Module Xirfadle Heer 2).
Tababar xirfadeed oo heer-dhexaad ah.
Liisanka wadista darajada B ee leh rukhsadda gaadiidka iskuulka, gaadiidka rakaabka dadweynaha.
Cinwaanka Farsamo yaqaan Sare (Tababbarka Xirfadeed ee Shahaadada Sare ee laan kasta).
Bachelorka ugu sareeya.
Tababar Xirfadeed Labaad ah ama u dhigma.
Shahaadada Graduate ee Kalkaalinta Caafimaadka.
Dibloomada Kalkaalinta Caafimaadka.
Daryeelka Aasaasiga ah ee Farmashiistaha:
Shahaadada Bachelor-ka ee Farmasiga ama Shahaadada Bachelor-ka ee Farmasiga.
Khabiirka Aag Ikhtiyaariga ah:
Cinwaanka takhasuska takhasuska gaarka ah ee loogu talagalay inuu helo.
Ka soo horjeedka SAS ee daaweynta jimicsiga jirka:
Dibloomada jimicsiga jirka ama shahaadada jimicsiga jirka.
ATS / Khabiirka takhasuska leh ee jimicsiga jirka.
Shahaadada Injineer Farsamo ee Warshadaha ama Shahaadada Injineerinka.
Cinwaanka Takhasuslaha Kalkaalisada Caafimaadka Umulisada (Umulisada).
Daryeelka Koowaad ee Dhakhtarka Qoyska:
Magaca Takhasuska Caafimaadka ee Qoyska iyo Daawada Bulshada.
Shaqaalaha Dharka iyo Dharka, Kaaliyaha jikada:
Cinwaanka Farsamayaqaanada Farmashiyaha (Tababarka Xirfadeed ee Darajada Dhexdhexaad, laanta caafimaadka).
Ka soo horjeedka SAS ee Farsamayaqaan Takhasus leh ee Radiodiagnosis:
Cinwaanka Farsamayaqaan Takhasus leh ee Radiodiagnosis (Tababar xirfadeed oo heerka labaad ah, laanta Caafimaadka).
Cinwaanka Farsamo yaqaan Sare ee Sawirka Cilad-baarista (Wareegga Tababbarka Darajada Sare, Caafimaadka qoyska xirfadle).
Dibloomada Jaamacadda ee Kalkaalinta Caafimaadka.
Shahaadada takhasuska leh ee Radiology iyo Electroradiology.
Aqoonsiga lagu shaqeynayo qalabka raajada ujeedooyin cilad-baaris ah oo ay soo saareen Golaha Amniga Nukliyeerka
Farsamayaqaan Takhasus leh ee Radiotherapy:
Cinwaanka Farsamayaqaan Takhasus leh ee Radiotherapy (Tababarka Xirfadeed ee Darajada Labaad, laanta Caafimaadka).
Cinwaanka Farsamo yaqaan Sare ee Radiotherapy (Wareegga Tababarka ee Shahaadada Sare, Caafimaadka qoyska xirfad leh).
Shatiga wadaha xarunta shucaaca ee ay soo saartay Golaha Amniga Nukliyeerka ee arjiga shucaaca.
Shaqada Maamulka Farsamada:
Farsamo yaqaan Telefoon:
Dibloomada Shaqada Bulshada.
Shahaadada Shaqada Bulshada.
Nidaamka baaritaanka ama xulashada
Sida had iyo jeer dhacda kiisaskan, imtixaanku wuxuu leeyahay laba qaybood oo guud. Midkoodna waa waxa loogu yeero wejiga mucaaradka iyo tan labaad, ee ku saabsan tartanka mudnaanta.
Dhibcaha ugu badan ee wejigan waxay noqon doonaan 100 dhibcood. Waxay noqon doontaa mid laga takhaluso waxayna ka koobnaan doontaa imtixaannada soo socda:
Fulinta su'aalo qoraal ah. Waxaa jiri doona wadar ahaan 103 su'aalood dhammaantoodna xulashooyin badan. Xusuusnow in seddex kamid ah la keydin doono. Dhibcaha ugu badan ee suurtogalka ah waxay noqon doontaa 50 dhibcood.
Qaybta labaad waa su'aalo-waydiin wax ku ool ah oo leh 50 su'aalood, sidoo kale xulashooyin badan. Halkan mawduuca gaarka ah ee qaybta aan ka soo horjeedno ayaa geli doona. Badanaa waxay ka kooban yihiin xaalado caafimaad oo dhab ah. Dhibcaha ugu badan ee qaybtani waxay noqon doontaa 50 dhibcood.
Dadka doorta marinnada marin-u-helidda ee loogu talagalay dadka naafada ah xagga caqliga, waxay leeyihiin imtixaan looga takhalusi karo. Waxay ka koobnaan doontaa fulinta foomka su'aalaha oo leh 50 su'aalood oo xulashooyin kala duwan ah.
Waa inaad ogaataa in jawaab kasta oo sax ah lagu qiimeyn doono 2 dhibcood, oo aan laga goyn doonin dhibcaha jawaabaha qaldan. Si looga gudbo wajiga mucaaradka, dhibcaha la helay (wadarta dhibcaha laga helay su'aalaha teori iyo su'aalaha la taaban karo) waa inay gaaraan, ugu yaraan, 60% dhibcaha.
Haddii aad ka soo gudubtay wajigii mucaaradka, markaa waxaad gaari doontaa wejigii loogu yeero tartan. Halkan dhibcaha ugu badan ee aan heli karno waxay noqon doonaan 100 dhibcood. Kuwa la helay wejiga koowaad ayaa sidoo kale lagu dari doonaa.
Hadda oo aan ognahay qodobbada ugu muhiimsan ee aan awoodno inaan kuugu soo bandhigno Tartamyada Adeegga Caafimaadka ee Andalusian (SAS), waa xilligiinna, maxaa yeelay meelaha ayaa sii kordhaya sanad walba.